शाहीसत्ताद्वारा बलात्कृत किशोरीहरूको कथा – eratokhabar
शाहीसत्ताद्वारा बलात्कृत किशोरीहरूको कथा
- शान्ता श्रेष्ठलेखकका सबै लेख-रचना हेर्नुस्
ई-रातो खबर २०७३, १६ मंसिर बिहीबार १२:३७ December 1, 2016 1073 Views
२०५७ साल वैशाख १० गते
त्यो दिन बिहानै मनुजी (श्रीमती मनु हुमागाईं) दुईवटी केटीका साथमा मेरो घरमा आइपुगिन् । तीनैजनाले जुत्ता फुकाली मलाई बडो शिष्टतापूर्वक नमस्कार गरे । सारै अप्ठ्यारो र असजिलो मानी मेरो कोठाभित्र बसे । ती केटीहरूलाई मनुले भनिन्, ‘यता बस ।’
‘Ò दिदी ! मैले बारम्बार यी नानीहरूका बारेमा तपाईंलाई जानकारी दिएकी थिएँ । आज साक्षात्कार गर्न ल्याएँ । यी नानीहरू सामूहिक बलात्कारका सिकार हुन्Ò।’
म स्तब्ध भएँ । एकाएक मेरो कोठा अँध्यारो भयो । पूर्वमा उदाएको सूर्य पूर्वमै अस्ताएको देख्न थालेँ । मैले ती नानीहरूको अनुहार हेर्न सकिनँ । कठै ! किशोरी अवस्थामा उकालिँदै गरेका कर्कलोको पातमाथिको शीतको थोपाजत्तिकै चम्किलो, ओठ निचोरे दूध निस्किएलाजस्ता नानीहरू सामूहिक बलात्कारका सिकार ?! मनमा अनेकौँ कुरा खेलाउँदै बिस्तारै तिनीहरूको अनुहार हेरेँ । दुवैजनाको अनुहार खुट्टामाथि घोप्टिएका थिए । मानौँ अन्धकार भविष्यको फाँटमा टेक्दै मेरो कोठासम्म आइपुगेका खुट्टासित प्रश्न गरिरहेका थिए— अब यहाँबाट कहाँ पुग्नुपर्ने हो ? खुट्टाका औँलाहरूलाई मायाले सुम्सुम्याइरहेका थिए कलिला हातका औँलाहरूले । नाक रसाइरहेकाले बारम्बार रुमालले नाक पुछिरहेका थिए । विरह, व्यथा र अन्योलपूर्ण भविष्यले मलीन अनुहार, अत्यन्त सुस्त शरीर, आँसु चुहिरहेका दुई जोडी आँखा, खुट्टामाथि घोप्टिएको अन्योल अवस्थाले मेरो मुटु छामेको आभासले म चिसो छट्पटीमा थिएँ । कोठा चुपचाप र स्तब्ध थियो । मानौँ मानवशून्य झ्यालखाना । कोठाको मौनता भङ्ग गर्दै मैले भनेँ, ‘मनुजी ! पहिले हामी केही खाऊँ । अनि कुरा गरौँला हुन्न ?’
अभैm दिव्यज्योतिको मुखबाट शब्दहरू बाहिरिन सकेका थिएनन् । उनका ओठ कामिरहेका थिए । आँखाबाट बलिन्द्रधारा आँसु बगिरहेको थियो । उनले अनुहार घोप्ट्याएरै बिस्तारै भनिन्, ‘त्यो दिन २०५७ साल मङ्सिर २७ गते थियो । बिहानै प्रहरीहरूले अचानक हाम्रो घरमा हमला गर्न आउँदा म, मेरी आमा र ३ वर्षको भाइ मात्र थियौँ । आमा र मलाई लछारपछार पार्दै भुइँमा लडाए । हातखुट्टा बाँधेर चरम यातना दिए । त्यसपछि खुट्टाको डोरी मात्र फुकाली पशुलाई जस्तै घिसार्दै प्रहरी चौकीतिर लैजाँदै थिए । मेरो ३ वर्षको भाइ चिच्याइचिच्याइ रुँदै थियो । एक घन्टामा पुगिने चौकीमा ४ घन्टाको बाटोबाट घुमाउँदै पु¥याए । आमा र मलाई अलगअलग स्थानमा राखे । बेहोस नभएसम्म यातना दिए सइ रामसिं थापा र राजेन्द्र अधिकारीले । ती दुवै स्याङ्जा निवासी थिए । आमा र मेरो खुट्टामा एउटै साङ्लोले बाँधी बारम्बार ब…।’
त्यसपछि उनी बोल्न सकिनन् । खास्टोले मुख छोपी खुब रोइन् । मनु र म लाचार बन्दै शिर झुकाई किंकर्तव्यविमूढ हुन थाल्यौँ । गहिरोगहिरो उच्छ्वास छोड्नुबाहेक अरू केही भन्न वा गर्न सकेनौँ । हामी दुवैजना आँखामा भरिएको आँसु चूपचाप पिउँदै थियौँ । बिचरी निर्मला पुन डाँको छोडी रुन मात्र बाँकी थिइन् । उनको कलिलो अनुहार निलो हुँदै थियो । हिकहिक गर्दै दिव्यज्योति भन्न थालिन्, ‘एउटै साङ्लोले आमाको दायाँ खुट्टा र मेरो बायाँ खुट्टामा बाँधी बारम्बार बलात्कार गरे । मेरो योनीमा लट्ठी घोचे । म कुन बेला बेहोस भएँ ? चालै पाइनँ । बिहानदेखि पेटमा पानीसमेत परेको थिएन । मरणासन्न हुने गरी यातना, त्यसमाथि सामूहिक बलात्कार । योनीमा लट्ठीले घोचेर घुमाएको पीडा…। त्यति बेला हामी आमाछोरीले भोगेको शारीरिक यातना र अत्याचार मैले कसरी, कुन मुटु लिएर भनूँ ? त्यति बेला मर्न पाएको भए कति जाती हुन्थ्यो ! हामीलाई कालले पनि देखेन । मेरो ३ वर्षको भाइ रुँदै थियो । के भयो उसलाई ? मनमा ठूलो पिर थियो ।’
‘निर्मला, डराउनु पर्दैन । तिमीमाथि जे बितेको थियो, छोट्करीमा भन । त्यसरी भन्दा तिम्रो मन हलुका हुनेछ । भन बा…बिस्तारै भन…’, मनुले सम्झाउँदै भनिन् । निर्मला पुन टोलाउन थालिन् । उनका दायाँ हातका औँलाहरू भने खुट्टाका औँलाहरूमाथि नै थिए । उनले अचानक भनिन्, ‘म हाम्रो घरको अलि पर पुगेपछि ७÷८ जना प्रहरीले मलाई समाते । ‘माओवादीलाई भात ख्वाउने, पानी पिलाउने तँै होइनस् ?’ भन्दै मलाई कुट्दै र लात्तीले हान्दै लछारपछार पारे । मलाई उत्तानो पारी ३÷४ जनाले समाते अनि पालैपालो मलाई बलात्कार गरे ती पापी–अपराधीहरूले …।’
गोरी दिव्यज्योतिको अनुहार रातो भई बाक्लो देखिएको थियो । त्यसमाथि आँसुले भिजेको थियो । ताम्रवर्णकी निर्मलाको अनुहार भने प्रायः निलो थियो । आँखामा आँसु ओभाएको थिएन । दुवैले बिस्तारै चिया खान थाले । एकैछिन सुस्ताएपछि निर्मला भन्न थालिन्, ‘त्यतिबेला अलि माथि खारामा अग्निकाण्ड भएको थियो । त्यहाँ भएका जति सबै घरहरूमा प्रहरीहरूले आगो लगाइदिएका थिए । एकातिर गाउँ ह्वारह्वारती बलिरहेकाले गाउँलेहरू आतङ्कित थिए भने अर्कोतिर मलाई बलात्कार गरिरहेको देखेर मेरी आमा रुँदैकराउँदै र चिच्याउँदै ‘मेरी छोरीलाई बचाऊ’ भनी गुहार मागिरहनुभएको थियो । तिनीहरूले आमालाई समाती कुट्दै र लछारपछार गर्दै थिए । त्यसपछि के भयो ? मलाई थाहा भएन । म बेहोस थिएँ ।
‘दिज्यूले भन्नुभएको एकदम ठीक हो । शक्तिमा रहेका ठूलाबडासित हाम्रो पहुँच छैन । के गर्नु ? त्यस्ता मान्छेहरू विश्वासी नभएर पनि विश्वास गर्नु हाम्रो बाध्यता हो । त्यसो भए दिज्यू, म आजै मेरो मनले खाएकाहरूसित सम्पर्क राख्छु । भोलि जसरी भए पनि समूह निर्माण गर्नतिर लागौँ ।’
छलफल सुरु गरिन् डा. शान्ता थपलियाले । म, रेखा शर्मा र मनु हुमागाईंबाहेक अरू महिलाहरूले उनलाई अभिभावकजत्तिकै मानेका थिए । तिनीहरू सबैको मत मिलेको थियो । तिनीहरू एनजीओका सञ्चालकहरू थिए । कोठा शान्त वातावरणमा नै थियो । बलात्कृत बालाहरूदेखि तिनीहरू प्रभावित भएको उनीहरूकै अनुहारमा देखिएको थियो । १४÷१५ जना महिलाहरूका बीचमा एकजना मात्र पुरुष थिए सुशील प्याकुरेल । ती सबैका मनमा अनेकौँ प्रश्न र जिज्ञासा थिए बलात्कारको घटनाबारे । जस्तो कि कुन अवस्थामा सामूहिक बलात्कार गरे ? थुनुवामा रहँदा कस्तो अवस्था थियो ? त्यहाँको हालको अवस्था कस्तो छ ? थुनुवाबाट कसरी छुटे ? हाल ती बालाहरूको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था कस्तो छ ? आदि अनेकौँ प्रश्नको उत्तर रुँदै तिनीहरूले बताएका थिए । बलात्कारको अवस्थाको सङ्क्षिप्त दृश्य बताउँदा सुन्नसक्ने अवस्था नै थिएन । सबैले भैगोभैगो, अब अरू बढी केही बताउनु पर्दैन… भनेका थिए । उक्त पाशविक घटनामाथि उनीहरूको भनाइ त्यति धेरै मार्मिक, घृणित र दर्दले भरिएको थियो ।